Intambo yombane ephezulu
Imveliso yenziwe ngamandla aphezulu e-aluminium anti-corrosive alloy ukukhusela ukubekwa kweentambo. intambo.
Intonga yomhlaba lolona hlobo luxhaphakileyo lwe-elektrode esetyenziselwa inkqubo yomhlaba. Inika unxibelelwano ngqo emhlabeni. Ngokwenza njalo, bachitha umbane phantsi. Intonga yomhlaba iyiphucula kakhulu intsebenzo iyonke yenkqubo yomhlaba.
Iirandi zomhlaba ziyasebenza kuzo zonke iintlobo zofakelo lombane, okoko nje uceba ukuba nenkqubo esebenzayo yokuqinisa umhlaba, kokubini ukufakelwa ekhaya nakwezorhwebo.
Iirandi zomhlaba zichazwa ngamanqanaba athile oxhathiso lombane. Ukuxhathisa kwentonga yomhlaba kufuneka kusoloko kuphakamile kunaleyo yenkqubo yomhlaba.
Nangona ikhona njengeyunithi, intonga yomhlaba eqhelekileyo inamalungu ahlukeneyo ayintsimbi, kunye nokwaleka ngobhedu. Ezi zimbini zidityaniswe ngenkqubo ye-electrolytic ukwenza iibhondi ezisisigxina. Umdibaniso ugqibelele ukusasaza okwangoku.
Iintonga zomhlaba ziza kubude obahlukeneyo kunye nobubanzi. ½ ”sesona sithuba sithandwayo esithandwayo seentonga zomhlaba lo gama ezona ntonga zikhethiweyo ziinyawo ezili-10.
Ground Intambo uqinisa
Intambo yomhlaba eqinisa ukulingana yombane esetyenziselwa ukudibanisa icandelo elithwele intonga yomhlaba kwintambo yomhlaba. Intonga iqinisekisa ukuba intambo yomhlaba ibekwe ngokufanelekileyo kwaye uqinisa lubalulekile ukugcwalisa olu nxibelelwano.
Intonga yomhlaba yenziwa ngesinyithi somsebenzi onzima wokumelana ne-vagaries yendalo kuba ityhilwe ngaphandle kwimeko yomhlaba.
Iintambo zokubamba zomhlaba ziza ngobubanzi obahlukeneyo. Ukhetho lwakho luya kuxhomekeka kububanzi bomqhubi womhlaba kunye nentonga yomhlaba.
Uyilo olufanelekileyo lwentonga yomhlaba luqinisekisa ukuba luseka unxibelelwano oluzinzileyo nolomeleleyo ngentonga yomhlaba kunye nentambo yomhlaba. Ifezekisa le njongo ngaphandle kokuphazamisa ukusebenza kwekhebula lomhlaba.
Uqinisa uhlobo Dibration Damper for ADSS / OPGW iintambo, withtuning isakhiwo ifolokhwe of Damper Ubunzima, iqinisekiswe China Electric Power Research Institute ukuba kukho amaza amane phakathi 5 ~ 150HZ, kunye noluhlu lokungcangcazela kwalo lubanzi kune FG Damper okanye FD Damper. Zininzi iiDamper Dampers ezifakiwe kwiintambo ze-ADSS.
Iitishi ezijikajikwa nge-Bolt yamehlo kunye neBolt Bolt
Igama lemveliso: Iibhendi ezijikajikwa ngeBlue Bolt kunye neBolt Bolt
Umphezulu weTreatmnet: Isefu, i-Stainless kunye nolunye uhlobo lonyango lomphezulu.